Milicsiga Taariikhda Faneed Ee Cabdi Cali Bacalwaan: Mid Ka Mid Ah Fannaan- iintii Loogu Jeclaa Hoballada Waaberi – Q:2aad | FooreNews
Home wararka Milicsiga Taariikhda Faneed Ee Cabdi Cali Bacalwaan: Mid Ka Mid Ah Fannaan- iintii Loogu Jeclaa Hoballada Waaberi – Q:2aad
Milicsiga Taariikhda Faneed Ee Cabdi Cali Bacalwaan: Mid Ka Mid Ah Fannaan- iintii Loogu Jeclaa Hoballada Waaberi – Q:2aad
FoorenewsFeb 10, 2018wararka0
Qalinka: Maxamed Maxamuud Yuusuf (Ilkacase)
Fannaanka oo arrimahaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Fanku waxa uu ahaa wax laabtayda ku jira. Fanaaniintii naga horraysay heesaha ay qaadaan ayuunbaan qaad-qaadi jiray oo aan jeclaa. Markaasaan iska dhigi jiray nin heesaa ah oo belaayo ah oo khatar ah. Intaan meelahaa xaafadaha dhexdooda fadhiisto ayaan heesaha qaadi jiray. Heesaha fanaaniintii naga horraysay ee aan idaacadda ka dhagaysto ayaan qaad-qaadi jiray. Kadib markii taariikhdu ahayd 1965-kii ayuunbaan maqlay tartan yar oo laga ogaysiinayo Raadiyow Muqdisho.
Tartankaasi la baafiyey waxa ay ahayd oo ay idaacaddu tidhi waxa la doonayaa in koox la tartanta kooxdaasi la doonayo. Aniguna markaasi garoo waxaan iska ahay nin fan suuq ah, maadaama aan ahay nin yar oo suuqa iska joog jooga oo meelahaa ka hees heesa oo waliba urursada heesaha hore oo qayba kadibna meelahaa kaga luuqluuqeeya. Tartankii baan ka qayb galay oo waxaan soo ururiyey muusigyahano yaryar oo aan midba meel ka keenay. Mid Marka aan ka keenay mid aan magaalada dhexdeeda ka keenay iyo mid kaleba. Koox yar baan soo ururiyey oo aan doonay in aan kaga qayb galo tartankaasi la doonayay in laga qabto Radio Muqdisho. Markaa kooxdan aan soo ururiyey dhammaantood waa muusigyahano yaryar oo aan cidiba aqoon oo dhallinyaro ah anna waan heesayaa oo iyaga ayaa ii tumaya. Markaa tartanka waxa la rabaa in lagaga qayb galo saddex heesood oo middiiba soconayso shan daqiiqo. Waxba yaanan hadal idinku daaline, ninkaygii yaraa ee meesha yimid ee aanay cidina garanayn boodhbaan kaga duuliyey meeshii oo 15-kii daqiiqadood ayaan saddex heesood oo dhamac ah kasii daayay. Waxa la doonayay koox Radio Muqdisho lagu hayay koox la tartanta oo magaalada laga raadinayay. Kadib qoladii maamulka tartanka ahayd ayaa waxa ay yidhaahdeen markii tartankii dhamamaday waar inankan yar ee kooxda isku soo ururiyey, kooxda qaranka la tartansiin maynee isaga ayaan lambarka koowaad siinaynaa. Sidaasaan kaalinta koowaad ku galay oo ay ii siiyeen”.
Fannaan Cabdi Cali Bacalwaan oo wax laga waydiiyey heesahan saddexda ah ee uu tartankaasi ugu horreeyey kaga qayb galay waxa uu yidhi: “Heesahan waxa isu geegeeyey aniga iyo nin aannu saaxiibbo ahayn. Isagu qaarbuu sameeyey anna qaarbaan sameeyey. Waxbaannu isku gaygaynay oo cudud yar oo isku tagtay baannu ahayn”.
Markii haddaba tartankaasi dhammaaday Fannaan Cabdi Cali Bacalwaan waxa uu noqday nin caan ah oo durba Magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda laga bartay waxaanay halkaasi noqotay bar-bilawgii uu ka soo fuulay sallaanka Faneed ee uu markii dambe cirka uga baxay. Fannaanka oo arrintaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Markii aan halkaasi kaalinta koowaad ku galay waxaan noqay nin caan ah oo dadkii u sacabinayaan oo macruuf noqday. Markii aan halkaa gaadhay waaban u qaadan waayay!. Layaab ayay igu noqotay. Markaasaan is idhi wallaahi darkaad jiidhay!!. Kadib waxa gacanta la iga saaray lacag badan oo ahayd 400 oo shilin oo markaasi aan la soo koobi karayn qiimaha ay leedahay iyo xaddigeeda. Wakhtigaana ninkii boqol shilin hayaa waxa uu ahaa nin la yidhaa ninkaasi Boqol madaw buu hayaa. Anigiibaa markaa afar boqol oo madmadaw la i siiyey. Labaatanka Shilin ayaa muddo la haynayaa muddo dhan oo ku deeqaysa. Waa bari-samaadkii” ayuu yidhi Cabdi Cali Bacalwaan.
Intaa kadib Fannaanka caanka ah ee Cabdi Cali Bacalwaan halkee uga sii socday oo tallaabo noocee ah ayaa u xigtay. Fannaanka ayaa innooga warramaya waxaanu yidhi: “Isla markiiba Radio Muqdisho waxa ay tidhi isaga cid la qaato ha ugu horreeyo. Kadib kooxdii fannaaniinta ee ciidanka Xoogga Dalka ayaa waxa ay soo qaddimeen codsi waxaanay yidhaahdeen inanka yar ee soo baxay ee tartanka maalintii dhawayd lagu qaatay darajo ayaannu siinaynaa oo imtixaanbaan ka qaadaynaa ee annaga noo daaya annagaa qaadanaynee. Kadib waxa ay yidhaahdeen waa in uu Dhiboo galaa oo Tababar Milatari galaa. Kadib sannadkii xigay ee 1966-kii ayaan tababarkii Dhibooga ahaa galay. Kooxda ciidanka Milatariga markaa waxa ka mid ah fannaanadda weyn ee Saynab Xaaji Cali Baxsan, waxa kale oo ku jira Cismaan Aadan Xuseen (Cismaan Askari) oo ahaa abwaan weyn, sidoo kale waxa ku jira Abwaan Maxamuud Cabdilaahi Ciise (Singub), Abwaan Cali Diiriye (Cali Gaab) ayaa ku jiroo. Kooxdu markaa waa kooxdii nambarka koowaad ahayd ee fanka ahayd. Markaa kooxdu waa koox Milatariga ah oo qaybteeda Fanka ah waxaanay yidhaahdeen inankaa yar annaga ayaa qaadanayna”…
Previous PostSiyaasi Maxamed Xaashi Oo Muuse U Soo Jeediyay Inuu Laalo Wadahadaladii Soomaliya,Sheegayna In Madaxda Somaliya Ku Jiraan Kuwo Ka Qayb Ahaa Xasuuqii Jaziira Next PostWasiir Labaad Oo Ka Tirsanaa Xukuumaddii Hore Ee Axmed Siilaanyo Oo Beero-Qode Noqday Kana Hadlay Sababta Uu Shaqadaasi U Doortay